महिलाको स्तनबारे १० रोचक तथ्य जुन तपाइहरूलार्इ जानकारी छैन - inaruwaonline.com
महिलाको स्तनबारे १० रोचक तथ्य जुन तपाइहरूलार्इ जानकारी छैन
प्रकाशित मिति: आइतबार, आषाढ १२, २०७३ समय: १०:४३:५७
एजेन्सी / पुरुष महिलाको बक्षस्थलप्रति सँधै चनाखो हुन्छन् । पुरुष मात्र होइन महिलालाई पनि आफ्नो बक्षस्थलबारे सँधै चिन्ता र चासो हुन्छ । महिला र पुरुष दुवैलाई चासो हुने महिला अंग हो बक्षस्थल । धेरैलाई थाहा पनि नहुन सक्छ बक्षस्थल कति किसिमको हुन्छ ? धेरैलाई जिज्ञासा पनि होलान् महिलाको आकार स्तनको किन फरक फरक हुन्छ ? कति को त प्रश्न पनि होला किन महिलाको मात्र बक्षस्थल हुन्छ, पुरुषको किन हुँदैन ? तर, स्तन र निप्पल पुषको पनि हुन्छ । कुनै कुनै पुरुषको स्पस्ट देखिन्छ । कुनै को सामान्य नै हुन्छ । कतिलाई पत्यार नलाग्ला शुरुमा सबै भ्रुण केटीनै हुन्छ भन्दा । तर, यो सत्य हो । गर्भावस्थाको ६ हप्ता पछि मात्र टेस्टोस्टरनका कारण लिङ्ग छुट्टिन शुरु गर्छ ।
स्तनको बारे १० रोचक तथ्य संकलन गरिएको छ ।
५) यदि महिला घोप्टो परेस सुतेमा उनीहरुको स्तनको आकारमा प्रभाव पर्न सक्छ । महिलाहरुलाई सके सम्म घोप्टो परेर नसुत्न र सुत्नै परे स्तन भन्दा तल सिरानी राखेर सुत्न चिकित्सकहरु सल्लाह दिन्छन् । सुत्ने समयमा ब्रा नलगाएको राम्रो हुन्छ । लगाउनै परे अलि खुकुलो ब्रा लगाउन चिकित्सकहरु सल्ला दिन्छन् ।
१०) महिला सतनमा निप्पल ८ प्रकारका हुन्छन्ः सामान्य, फ्ल्याट, पफी, इन्भर्टेड तथा एक्ट्रोभर्टेड इत्यादि ।